Ọnụ ọgụgụ ndị a na-ejikọta ọnụ, Malta
Tgbọ ala Maltese Vintage
Ịdabere na Wheels
Obi dị anyị ụtọ na anyị na-arụ ọrụ otu n'ime Ụlọ ọrụ Nchịkọta Ukwu na nke kachasị ọhụrụ, na Bus Bus, na Chauffeur Driven Car Fleet.
Aha Mbụ na Maltese Transport
Emere aha anyị na ntinye aka na ụkpụrụ dị elu, ọrụ dị mma, na ndị ahịa.
Ụlọ Nchịkọta Nchịkọta 70 afọ
Kemgbe 1944, e nyewo anyị udo nke uche maka ndị ahịa chọrọ ọrụ njem na Malta.
NKWUKWU NDỊ KWURU ỤLỌ
Ngwongwo kachasị bụ ụlọ ọrụ na-eduga n'ọdụ ụgbọ mmiri na Malta na-enye Ụlọ Ọrụ Nchịkwa, Mini Bus, na Ọrụ Chauffeur Driven na Malta kemgbe 1944. Nkwa anyị bụ àgwà ọkachamara nke na-elekwasị anya na ndị ahịa mkpa iji hụ na ngwọta ndị njem a pụrụ ịdabere na ya.
Obi dị anyị ụtọ na anyị na-arụ ọrụ nke nnukwu ụgbọ mmiri ndị dị na Malta iji nye ọrụ dị elu maka Ụlọ Akwụkwọ, Ụlọ Akwụkwọ, Embassies, Hotels, DMC, Tour Operators, Gọọmenti na Ndị Obodo.
Ndị ahịa anyị na-ahọrọ anyị maka udo nke uche anyị na-enye ha. Anyị na-eme nke a site na ọmụma anyị mara mma nke njem na Malta na anyị flair na-eme ihe ọ bụla nwere ike ime.
Site na netwọk anyị, anyị na-enwe ike ịnye ọrụ ụgbọ njem dị na Malta maka ọrụ ụlọ ọrụ, ndị njem ụgbọelu na-ebugharị ụgbọelu, nnyefe ụgbọ elu na ịga akwụkwọ na kọleji.
Lọ akwụkwọ & COLLEGE ANgbọ njem
Anyị bụ ụlọ ọrụ ụgbọ njem kachasị na Malta na-enyefe ụmụ akwụkwọ ọha na eze, nke onwe ha, asụsụ mba ọzọ na ụlọ akwụkwọ ụka.
Anyị na-enye ọtụtụ njem nke Malta na Gozo na-emepụta ahụmahụ na-enweghị atụ nke akụ na ụba na akụkọ ihe mere eme nke agwaetiti anyị.
Na-enye ndị nlekọta nchịkwa oge na ọkachamara n'ọdụ ụgbọ elu dị n'etiti Malta International Airport na hotels / ntụrụndụ na Malta na Gozo.
MGBE ECHICHE TERMINAL KWURU
Inye onyinye site na ụgbọ mmiri na-ezo aka na-enyefe si na họtel na ebe ndị dị na Maltese Islands.
AKWORKWỌ & Ihe ndị ọzọ
Ịnyefe ndị ọrụ nnọchiteanya, nnyefe ụgbọ elu, na nlegharị anya chọrọ site na ọrụ ọrụ nchịkwa dị mma, ngwangwa ngwa ngwa, na ịdabere kpamkpam.
ELBỌR & &LỌ AKA NA ỌZỌ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịde akwụkwọ ma ọ bụ jụọ ajụjụ, nweere onwe gị ịkọtụrụ ndị ọrụ ọrụ anyị na ndị enyi anyị. Ha ga-enyere gị aka ịza ajụjụ ọ bụla i nwere ike ịnwe na izute ihe ị chọrọ ịchọrọ.
Ndị na-ahụ maka ụgbọ elu na-enye ndị ọrụ ụgbọ njem na Malta Football since 2002.
Ndị otu mba a na - ahụ maka otu a na - arụ ọrụ nke ọma na - eji nlezianya na - eje ozi site na Paramount Coaches:
ARMENIA, BULGARIA, CYPRUS, DENMARK, FINLAND, GEORGIA, GREECE, INTER, ISRAEL, LATVIA, LUXENBOURG, MACEDONIA, MANCHESTER UNITED, ELEGHỊGHỊ IRELAND, NORWAY, PORTUGAL, SWEDEN,
Njikọ Football Malta
"EF Language Travel na-eji Oghere Garage maka ọtụtụ n'ime mkpa njem ya maka ihe karịrị 15 afọ. A na-eziga arịrịọ anyị mgbe niile na ọtụtụ ọrụ ọkachamara na site na ọrụ nke a na-atụkwasị obi ma bụrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi. Ụdị ndị nkụzi na àgwà ndị ọkwọ ụgbọala na-egosipụtakwa nke a. "
EG LANGUAGE akwụkwọ
Site na ụgbọ elu nke ndị 300 America na mba ndị ọzọ sitere na Tripoli, Libya na-esote anyị, Achọrọ m iwepụ oge ma gosipụta ekele m nwere maka gị na Paramount Coaches Ltd. Maka enyemaka aka gị n'oge a na-achụpụ gị na mgbalị ndị ọzọ enyere ndị nnapụta.
Mmasị ị dị njikere ịhazi nke ọma na ndị ọrụ Embassy na usoro mmepụpụ dị oké mkpa iji mee ka ndị nnapụtara wee nwee ike ịmalite ma nweta enyemaka dị mkpa. Karịsịa, mgbanwe gị na nghọta gị dịka oge njem njem ụgbọ mmiri gbanwere tinyere ihu igwe dị ezigbo mkpa. Anyị enweghị ike inyere ndị nnabata aka n'ụzọ dị irè n'enweghị nkwado na ntinye onwe ha n'aka Paramount Coaches Ltd. "
US ỤBỌ NKE MALTA
Mazi Douglas W. Kmiec - onye nnọchiteanya maka US
"Mgbagwoju anya nke Mosta, ugbu a na-eje ozi na Ngalaba Mahadum dị iche iche na ọrụ ndị njem dị mkpa, maka afọ 35 ikpeazụ.
N'oge a, anyị achọpụtala na ụlọ ọrụ njem a bụ ndị a pụrụ ịdabere na ha. Ma maka onye nchịkwa, ụgbọ elu, ọkwọ ụgbọala na-ebugharị ụgbọala na oge nnyefe ọrụ bụ nke kasị mma nwere ike ịbanye n'àgwàetiti.
E wezụga asọmpi ịsọ asọmpi, ndị ọkwọ ụgbọala nke ọma na oge oge anyị achọpụtawo Paramount ka anyị bụrụ onye ọrụ dị mkpa n'inyere anyị aka ịsọ mpi na nkwakọ ngwaahịa kachasị mma maka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ si mba ọzọ na ndị ọbịa. "
IHE Na-eme ka anyị mara
Afọ iri afọ 70 anyị na-etinye aka n'ichepụta ihe nyere anyị ahụmịhe zuru oke na mpaghara ndị njem na Malta, na-enye anyị ohere inye udo nke uche na ọrụ ndị ọrụ na ndị ahịa anyị.
Nkwekorita na Ịgba Ọsọ
Afọ 70 Ọganihu
Ụbọchị ọ bụla bụ ụbọchị ọhụrụ maka anyị, anyị na-agbasi mbọ ike iji mezuo ndị ahịa anyị n'ebe niile.
Otutu MST 1858,
Mepee 24 / 7
Amụma Ahụike na Ahụike anyị
Copyright © 2017 - Eziri ya Eyelead + Eyetech . Ikike niile echekwabara